पहिलो पटक जागिर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस यी कुरा – Jagaran Nepal
काठमाडौँ । यदी तपाईं पहिलो पटक सानो वा ठूलो कम्पनीमा व्यवसायिक ८ घण्टाको जागिर गर्न गइरहनु भएको छ ? यदी यसाे हो भने तपाईंको मनमा डर र खुसी दुबै उत्पन्न हुन सक्छ । तपाईंले धेरै कुराहरु ध्यानमा राखेर आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनु पर्छ ।
“फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेशन” लाई सम्झेर जागिरको सुरुवाती दिनहरुमा इमेज बनाउनु पर्दछ । यसकारण राम्रो तयारी गरेर, पूर्ण आत्मविश्वाससहित अगाडि बढ्नुहोस् । तपाईंको व्यक्तित्व, छाप र दिगोपना निम्न कुराहरुले सहज बनाउँछ ।
अनुसन्धान गर्नुहोस् परिवर्तनलाई खुला मन र मस्तिष्कबाट स्वीकार गर्नुहोस् महिलासँग जोडिएका नियममा ध्यान दिनुहोस् व्यवसायिक सम्बन्ध र सम्पर्क राख्नुहोस् भाषा प्रयोग सौम्य बनाउनुहोस् निजी सम्बन्ध राख्नबाट बच्नुहोस् ।